Warbixinta xaaladda koroonaha oo afsoomaali ku qoran (Somali) | For Fangers Pårørende
Warbixinta xaaladda koroonaha oo afsoomaali ku qoran (Somali)
Warbixin ku socota qaraabada kuna saabsan xaaladda koroonaha
Xaaladda koroonuhu sida bulshada qaybaheeda kaleba way saamaysay daryeelka dadka denbiyada galay [kriminalomsorgen] iyo deeqda uu FFP u fidiyo qaraabada. In kastoo ay hadda wax walba u dhow yihiin in ay caadigii ku soo laabtaan, waxaa haddana muhiim ah in la yaqaanno qodobbada ka-hortagga is-qaadsiinta ee ka jira xabsiyada iyo FFP labadaba.
Daryeelka dadka denbiyada galay wuxuu bishii maarso soo rogay waxqabadyo badan oo looga hortagayo in xabsiyada koroone laysku qaadsiiyo. Waxaa kuwaas ka mid ahaa in qaraabada loo diiday in ay xabsiyada soo booqdaan, iyo in dadka xiran fasax loo diiday. Laga billaabo 22-kii juun waa la joojiyay waxqabadyadii ugu adkaa, nololmaalmeedka xabsiyaduna hadda sidii caadiga ahayd ayuu ku dhow yahay, sidii uu ahaa ka hor intaan cudurku dillaacin.
Sidii caadiga ahayd ayaa hadda xabsiyada loo soo booqan karaa, laakiin waxaa shardi ah in masaafo hal mitir ah laysu jirsado inta booqashada lagu joogo. Shardiga masaafadu ma khuseeyo carruurta ka yar 12 sano. Qofka waxaa booqashada ka hor la weydiin doonaa in uu isku arkay calaamadaha fayraska koroonaha ayadoo la adeegsanayo foomka u kuurgelidda ee mas’uuliyiinta caafimaadka, qofkana looma oggolaan doono in uu booqasho ku yimaado haddii uu isku arko calaamadaha marinka hawada. Ilaa iyo hadda lama oggola booqasho la cawa-baryayo guriga booqashada. Sidoo kale xeerarka fasaxu hadda waa sidii ay ahaayeen ka hor intii uusan cudurku dillaacin, ha ahaato fasaxyada caadiga ah iyo fasaxyada samafalka.
Daryeelka dadka denbiyada gala si hoose ayuu xaaladda ula socdaa wuxuuna had iyo jeer qiimayn ku samaynayaa wixii waxqabad ah ee loo baahan yahay. Inta cudurkaan faafi og ee koroonuhu socdo waxaa dhici karta in aaggii cudurka aad loogu kala qaadayo in uu sameeyo waxqabaydo deegaankaas ku kooban.
Gu’gii markii xabsiyada la xiray ee qaraabada loo diiday in ay booqasho ku yimaadaan, waxaa xabsiyada dalka oo dhan laga billaabay in ay dadka xiran iyo qaraabadu fiidiyow ku wada xiriiri karaan. Xabsiyadu deeqdaan halkeedii ayay hadda ka sii wadayaan ayadoo dheeri ku noqon doonta booqashada caadiga ah. Warbixinta sida loo isticmaalayo fiidiyowga lagu wada xiriirayo oo ku qoran afnorwiiji iyo afingiriis ayaa ku jira bogga internetka ee kriminalomsorg.no
Intii uu socday cudurkaan faafi og ee koroonuhu wuxuu FFP xiriir hoose la lahaa Agaasinka daryeelka dadka denbiyada gala (KDI) si gacan looga geysto in ay qaraabadu warbixin fiican helaan. KDI waxay samaysay bog xambaarsan warbixin loogu tala galay qaraabada, dadka xiran iyo shaqaalaha. Halkaan riix si aad u gasho bogga warbixinta (warbixin ku baxaysa afnorwiiji iyo afsoomaali).
Daryeelka dadka denbiyada galay wuxuu sameeyay telefoon loogu tala galay qaraabada. Ujeeddadu waa in qaraabada warbixin guud laga siiyo waxqabadyada uu daryeelka dadka denbiyada galay uga hortagayo in uu koroonuhu xabsiyada ku fido. Telefoonka qaraabada waxaad sidoo kale ku helaysaa warbixinta sida ay waxqabadyadaan u saameeyaan dadka xiran, adiga oo helaya qof aad la hadasho xilli ay xaaladdu adag tahay. Adiga oo aan magacaaga sheegayn ayaad soo wici kartaa, telefoonka waxaa la soo wici karaa maalmaha shaqada inta u dhexaysa saacadaha 09.00-15.00. Tlf.: 404 388 88
Firfircoonida iyo kulammada FFP inta lagu jiro koroonaha faafi og
Bilihii uu socday koroonaha faafi og intooda badan FFP wuu baajiyay dhammaan kulammada iyo firfircoonidii qaraabada, waxaana taas beddelkeeda dadka lagu casumay wadahadal iyo kulammo digitaal ah iyo weliba talasiin telefoonka laysku siinayay, iimayl iyo chat. Waxaan ku faraxsannahay in aan hadda dib idinkugu casumi karno kulammo, firfircooni iyo wadahadallo golahannaga ka dhaca! Waxaan ka fikirnay sidii looga hortagi lahaa kala qaadista, warbixin arrintaan ku saabsan ka eeg qaybta hoose ee bogga. Waxaan raacnaa talooyinka mas’uuliyiinta ee xaaladda koroonaha. Haddii ay soo baxaan waxqabadyo iyo talooyin cusub waxaa dhici kara in ay saameeyaan borogaraamka noo qorshaysan iyo deeqda qaraabada loo fidinayo.
Haddii aadan doonayn in aad ka soo qaybqaadato deeqaha aan fidinno weli waa suurtaggal in aad si digitaal ah nagula hadasho. Waxaan sidoo kale deeqda ku soo kordhinnay walk and talk halkaas oo aan dadka la hadalno inta aan lugabaxsiga bannaanka ku jirno.
Nala soo xiriir haddaad qabto su’aal la xiriirta deeqda FFP ama aad doonayso cid aad la hadasho! Warbixin intaan ka badan ka eeg deeqda FFP ee ku qoran borogaraamka ku jira boggayaga internetka. Telefoonku wuu furan yahay maalmaha shaqada inta u dhexaysa 9.00 – 15.30. Waxaan fidinnaa deeq chat maalmaha shaqada laga billaabo 9.00 – 16.00, asagoo khamiista furan ilaa iyo 20.00.
Haddii aad tahay qof qaraabo ah oo aan afnorwiijiga si fiican u aqoonnin oo ay kugu adag tahay in aad dadka afnorwiiji kula hadasho, waxaan kuu fidin karnaa wadahadal talo lagugu siinayo ayada oo laguu turjumayo. FFP wuxuu leeyahay la-taliye dadka laga tirada badan yahay kaas oo ku caawin doona haddii aad caawin kale uga baahan tahay hay’adaha kale.
Haddaan nahay FFP waxaan qaraabada iyo dadka aan wadashaqaynta leennahay oo dhan khayr ayaan u rajaynaynaa xilligaan adag ee khaaska ah!
Waxqabadyada looga hortagayo kala qaadista ee FFP
Si looga taxaddaro in aan la kala qaadin cudurkaan faafi og ee koroonaha ayaa waxaa jiri doona waxqabadyada soo socda kuwaas oo la raacayo marka la imaanayo golaha FFP ee laga qaybqaadanayo farfircoonida ay FFP ku qabato meelo ka baxsan golahayaga.
Haddii aad isku aragto calaamado sida xummad, qufac, dhuun-xanuun iwm. markaas ma imaan kartid kulammada, is-aragyada ama wadahadallada qofka gaarka loola yeesho ee ka dhaca FFP kamana qaybqaadan kartid firfircoonida ay FFP ku qabato meelaha ka baxsan golaha FFP. Si kastaba haddii aad timaaddo adigoo ay calaamadihii kaa maaqduun, waxaa nasiibdarro dhici doonta in aan kaa codsanno in aad firfircoonida ka baxdo. Wadahadallada qofka gaarka ah lala yeelanayo telefoon ama fiidiyow ayaa lagu qaban karaa, ama ballan cusub oo lagu wada hadlo ayaad qabsan kartaa.
Firfircooniyada ka dhaca golahayaga iyo kuwa dibedda dhaca labadaba waxaan isu jirsan doonnaa masaafo hal mitir ah, gacantana layskama salaamo.
Markaad timaaddo golaha FFP waxaan kaa codsanaynaa inaad isticmaasho saabbuunta gacmaha ee albaabka agtiisa taalla.
Xaaladda koroonaha darteed ayaa loo xaddiday tirada dadka ka qaybqaadan kara kulammada iyo firfircoonida FFP.
Dhammaan dadka u yimaada wadahadalka ama in ay ka qaybqaataan firfircoonida, kulammada iyo is aragyada FFP waa in ay bixiyaan magac iyo lambar telefoon si aan u ogaanno dadkii goobjoogga ahaa haddii ay dadka qaar jirradaan oo loo baahdo in la raadiyo dadka cudurka qaadi kara.
Ammaankaaga iyo kaayaga ayaan ka taxaddaraynaa. Waad ku mahadsan tahay in aad naga caawineyso sidii aan u xaddidi lahayn khatarta is qaadsiinta!
Warbixinta guud ee fayraska karoonaha halkaan ka eego:
Turjumidda warbixintaan waxaa taageero looga helay Imdi.